Logitech K760, fitendry keyboard tonga lafatra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fisian'ireo kitendry finday maro any an-trano dia manahiranaTsy hoe satria tsy maintsy mampiasa iray amin'ny fitaovana iray isika, fa mila mitazona ihany koa ny baterin'ny peripheraly ampidirina.
Miaraka amin'ny Logitech K760 vaovao isika dia mamono vorona roa amin'ny vato iray. Amin'ny lafiny iray, ny tontonana photovoltaic Izy ireo dia mandray ny angovo avy amin'ny hazavana ary mitahiry izany ao amin'ny bateriny mba hanomezana antsika elanelam-potoana hatramin'ny telo volana anaty haizina tanteraka, zavatra iray tena sarotra.
Etsy ankilany, ity piano fitendry ity dia misoroka ny fananana junk bebe kokoa ao an-trano hatramin'izay mamela antsika hampiasa azy io miaraka amin'ny fitaovana teloEny, avy any Apple izy ireo satria ny lakile dia manokana ho an'ireo fitaovana ireo.
Raha manana Mac, iPad ary iPhone isika, afaka manome ny toerana tsirairay amin'ny fitaovana tsirairay isika. Araka izany, amin'ny tsindry tsotra dia hisafidy izay gadget tiantsika soratana isika nefa tsy mila ampifangaroina intsony.
El Logitech K760 Hanomboka hamidy amin'ity volana ity ny $ 80.
Fanazavana fanampiny - Kitendry Wireless ho an'ny iPad amin'ny vidiny lafo
Loharano - iPhone Italia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Logitech K760, fitendry keyboard tonga lafatra ho an'ny iPad
Icatchyou dia hoy izy:
Ity dia navoaka vao tsy ela akory izay avy amin'ny EsferaiPhone. Aza manadihady bilaogy hafa toa anao. Manaraka bilaogy maro miteny Espaniôla aho ary tsy vao sambany nahamarika izany avy aminao aho.
Mamaly an'i Icatchyou
Raha ny marina dia sakaizan'i Sphere aho, tsy nisy olona teto nanao piraty na inona na inona ary raha nilaina izy ireo ho loharanom-baovao, dia nilaza izahay fa mendrika ny tsy hisy na inona na inona.
Ity keyboard ity dia efa noresahina matetika tato ho ato sy amin'ny bilaogy rehetra. Mankanesa any amiko avy any Mac (izay navoakako ny tenako roa andro lasa izay), Engadget, Engadget, ... andao, tsy vaovao manokana avy amin'ny Sphere iPhone, lavitra azy io.
Efa navoakanay tamin'ny par? Kisendrasendra madio avy eo.
PS: Manararaotra mandefa fiarahabana an'i Sphere aho, hizaha rehefa misy fotoana hihaonana indray. 😉
Manova aho mba hanampy ny lahatsoratra hoe avy any Mac aho izay navoakako tamin'ny 30 Mey: http://www.soydemac.com/2012/05/30/logitech-anuncia-su-teclado-solar-inalambrico-con-bluetooth/
Tsy an'ny rehetra ny fampahalalana amin'ny Internet ary ny plagiarism dia mitovy amin'ny fandikana, zavatra izay mbola tsy nataontsika. Inona koa, ny lahatsoratr'i Esfera iPhone ary ny anay dia toy ny voasarimakirana ho an'ny pastèque. Ny tsirairay avy dia manatona amin'ny fomba hafa tanteraka.
Delreal131 dia hoy izy:
Tiako ity bilaogy ity asa tsara ry zalahy ary zavatra iray hafa tiako poma 😉
Tagasnino dia hoy izy:
Raha manao concussion amin'ity ianao dia hanondro ny lohako
Valiny tamin'i Tagasnino
Keltxo dia hoy izy:
Tsy manana trackpad ity fitendry ity. Hiandry ny fivoahany isika.
Valiny amin'i Keltxo